Inkqubo yokuTshanisa iMentor – uMbutho wamaZiko okuBhala aMazwe ngaMazwe
I-IWCA Mentor Match Programme ibonelela ngamathuba okufundisa kwiingcali zeziko lokubhala. Inkqubo imisela i-mentor kunye ne-mentee match, kwaye ke ezo zibini zixoxa ngeenjongo zabo zokuthatha inxaxheba kwinkqubo, zithatha isigqibo malunga neendlela ezifanelekileyo zokuphumeza ezo njongo, kwaye zichaze iiparameters zobudlelwane babo, kubandakanywa amajelo onxibelelwano afanelekileyo kunye nokuphindaphinda kwembalelwano. Ngenxa yokuba inkqubo ithatha indlela engeyiyo i-dyadic, abacebisi kunye nabacebisi bayakhuthazwa ukuba babelane ngolwazi kwaye bafunde omnye komnye, kwaye ngoko ke, omabini amaqela axhamla kubudlelwane bokuqeqesha.
Ukufaneleka kunye neXesha
Abacebisi nabacebisi banokubonelela ngoluhlu lwenkxaso omnye komnye. Basenokuthi:
Jongani omnye komnye kwizibonelelo.
Qhagamshelana nabalingane kumazwe ngamazwe, kuzwelonke nakwingingqi yabo.
Nxibelelana nophuhliso lobungcali, uphononongo lwekhontrakthi, kunye nokunyusa.
Nika ingxelo malunga novavanyo kunye ne-scholarship.
Sebenza njengomvavanyi wangaphandle kuvavanyo lweziko lokubhala.
Khonza njengesalathiso sonyuselo.
Khonza njengosihlalo kwiiphaneli zenkomfa.
Phendula imibuzo enomdla.
Nikela ngezimvo zangaphandle malunga neemeko.
Onke amalungu e-IWCA afanelekile ukuba athathe inxaxheba kwiNkqubo yokuMatch ye-IWCA Mentor. INkqubo iqhuba kumjikelo weminyaka emibini, kwaye umjikelo olandelayo we-Mentor Match uya kuqala ngo-Oktobha ka-2023. I-IWCA Mentor Match Co-Co-Coordinators iya kuthumela uphando kuwo onke amalungu e-IWCA ngo-Agasti ka-2023 ebamema ukuba bathathe inxaxheba kwiprogram. Uphando lubuza imibuzo emininzi malunga neenjongo zelungu le-IWCA zokuthatha inxaxheba kwinkqubo neziko labo. Abaququzeleli baphonononga olu lwazi ngononophelo ukuze batshatise abacebisi nabacebisi abaneenjongo ezifanayo kunye/okanye amaziko. Ukuba abaNxibelelanisi abanako ukutshatisa umcebisi okanye umcebisi, baya kwenza konke okusemandleni abo ukuba bafumane umcebisi/ofundiswayo ofaneleka ngokufanelekileyo, benze iqela lomcebisi labathathi-nxaxheba abangenakuthelekiswa nanto, kunye/okanye baqhagamshele kwizibonelelo zoncedo zeziko lokubhala elongezelelweyo.
Ukuba unomdla wokuthatha inxaxheba kwintsebenziswano yokucebisa ngaphandle komjikelo wethu wesiqhelo weminyaka emibini, nceda uqhagamshelane nabaQuquzelelanisi (jonga iinkcukacha zoqhagamshelwano ngezantsi) ukuze ufunde ukuba ngawaphi amathuba akhoyo.
“Ukuba ngumcebisi ngenkqubo ye-IWCA Mentor Match kwandinceda ukuba ndicinge nzulu ngamava am, kukhokelele kubudlelwane bobungcali kunye nomlingane oxabisekileyo, kwaye kwandikhuthaza ukuba ndicinge ngendlela iingcebiso zobuchule ezikhokelela ngayo kulwazi olululo.”
UMaureen McBride, kwiDyunivesithi iNevada-Reno, Mentor 2018-19
“Kum, ithuba lokucebisa omnye umntu lalinezibonelelo ezimbalwa. Ndiye ndakwazi ukuhlawula phambili ngenkxaso emangalisayo endiyifumene ngokungacwangciswanga kule minyaka idlulileyo. Ubudlelwane bam nomcebisi wam bukhuthaza indawo yokufunda apho sobabini siziva sixhaswa ngumsebenzi esiwenzayo. Ukubamba esi sithuba kubaluleke kakhulu kuthi abo banokuziva bebodwa kumakhaya ethu okanye kumasebe anika umdla. ”
UJennifer Daniel, iYunivesithi yaseQueens yaseCharlotte, uMentor 2018-19
Inkqubo ye-IWCA Mentor Match ibonelela ngothotho lwemisitho qho ngonyaka ukulungiselela abacebisi nabacebisi. Nceda undwendwele i IWCA Mentor Match Events Shedule ukubona uluhlu lwangoku lweziganeko.
Ukuba unemibuzo malunga neNkqubo ye-IWCA Mentor Match, nceda uqhagamshelane ne-IWCA Mentor Match Co-Co-Cordinators Maureen McBride e mmcbride @ unr.edu kunye noMolly Rentscher molly.rentscher @ elmhurst.edu.